ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီဥက္ကဌဖြစ်ပြီးတော့မရိုသားတဲ့ဗီယက်နမ်သံအမတ် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာ ဗီယက်နမ်အစိုးရကသံဃာတော်များကို ရိုက်နှက်တဲ့ကိစ္စ၊ကျောင်းကနေနှင်းထုတ်တဲ့ကိစ္စကို လုံခြုံရေးကောင်စီမှာတင်ပြပြီးပြီလားလို.အင်နာစီတီသတင်းဌာနကမေးခွန်ထုတ်မေးမြန်တဲ့အခါ `ဘယ်သူမှမတင်ပြဘူး၊ တင်ပြစရာအကြောင်းပြချက်လည်းမရှိဘူး ‘ ဆိုပြီးအရှက်မဲ့စွာကာကွယ်ဖြေဆိုသွားပါသည်၊ ဗမာပြည်မှာသံဃာတော်များသတ်ဖြတ်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတုန်ကဆိုရင် လက်မနှေးဘဲ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့တာကိုထောက်ပြီးဗိယက်နမ်သံအမတ်မရိုသားဘူးလို. အခြားသောနိုင်ငံများမှ သံအမတ်များကပြောဆိုနေကြပါသည်။ရိုက်သလား၊မရိုက်ဘူးလားဆိုတာကို သတင်းများဖတ်ကြည့်ပါ၊
သတင်း ၁၊ သတင်း ၂၊ သတင်း ၃၊ သတင်း၎၊
လွန်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ.တုန်းက ဗီယက်နမ်၊ပါမတောင်ပိုင်မှာလေမုန်တိုင်းကြီး ကစ်စနာဝင်တိုက်ခဲ့ပြီး မြေပြိုကျ၊အိမ်ပျက်စီးခဲ့တာကြောင့် လူ၁၆၃ သေးဆုံးပြီး ၁၁ ယောက်လောက်ပျောက်ဆုံးနေပါသည်၊ ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားအကူအညီအနေဖြင့်ဗမာစစ်အခေါင်းဆောင်တွေက ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ အကူအညီပေးခဲ့သည်၊ ကိုသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့သည်၊ ဒီပေးတဲ့အကူအညီကို ရဟန်းသံဃာတော်များရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ရာတွင် ဒေဝဒတ်အုပ်စုမဟာမိတ်အနေနဲ့.အချင်းချင်းဆုချီးမြှင့်တာဖြစ်လေမလားကိုမေးခွန်ထုတ်စရာဖြစ်နေသည်။
UNITED NATIONS, October 16 — Nearly three weeks after some 400 Buddhist monks in Vietnam were evicted and beaten, and Vietnam took over the Presidency of the UN Security Council, on October 16 Inner City Press asked Vietnam’s Ambassador and Council President Le Luong Minh about the incident. Video here, from Minute 3:09.
Ambassador Le Luong Minh at first look puzzled, then smirked. Inner City Press explained the “hook” to the Security Council,areport that “supporters are also asking the U.S. ambassador to the United Nations to help them arrangeameeting with Vietnam’s U.N. ambassador.”
While U.S. Ambassador to the UN Susan Rice was present in the Council on Friday, when Inner City Press asked if the matter had been raised, Le Luong Minh said “no one has raised it, and there are no grounds for anyone to raise it.”
When monks, admittedlyalarger number, were cracked down on in Myanmar, the matter was quickly raised in the Security Council, and Myanmar is now on the Council’s agenda. There are other less than reasonable exclusions from the Council’s agenda, such as the tens of thousands of ethnic Tamils killed in Sri Lanka earlier this year. But when events like this take place inacountry holding the presidency of the UN Security Council, it should not be surprising that they are raised.
Viet Nam’s Ambassador with paper, answers not shown